पुरातात्विक महत्वका ४८५ सम्पदा पुनःनिर्माण :: Setopati
पुरातात्विक महत्वका ४८५ सम्पदा पुनःनिर्माण सरकारका तीन वर्षः
पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौं, फागुन ४
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तीन वर्षको अवधिमा भूकम्पले भत्किएका पुरातात्विक महत्वका ४८५ सम्पदाको पुनःनिर्माण गरेको छ ।
वि.सं. २०७४ फागुन ३ गतेअघि ८० सम्पदा पुनःनिर्माण भएकामा त्यसपछि ४८५ पुरातात्विक सम्पदाका पुनःनिर्माण भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सिंहदरबार मूल भवन उद्घाटनपछि सार्वजनिक गरेको ‘सरकारका तीन वर्षे प्रमुख उपलब्धि’ मा उल्लेख छ । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त राजधानीको मुटुमा रहेको रानीपोखरी प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास भएको थियो । भूकम्पले भत्किएका सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
ओली दोस्रो कार्यकालका लागि २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा खास प्रगति भएको थिएन । तीन वर्षको अवधिमा रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न गरी यस वर्ष दशैँअघि नै उद्घाटन भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा ‘म बनाउँछु, मेरो धरहरा’ अभियान शुरु गरेका थिए । सरकारका प्रमुख तीन वर्षे उपलब्धिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक सरकारबाट हट्नुअघि निर्माण थाल्न आवश्यक पूर्वतयारीसमेत सकिएको उल्लेख गरेका छन् । “जनस्तरबाट स्रोत सङ्कलनको आधारसमेत बनाइएको थियो, तर करिब दुई वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म ‘वरको इँटा पर’ पनि सारिएको थिएन”, उपलब्धि विवरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वका सिंहदरबारको पूर्व, दक्षिण र उत्तरी मोहडाको प्रबलीकरण सम्पन्न गरी सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौँको नामकरण भएको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ देखि गत आव २०७६÷२०७७ सम्म रु तीन अर्ब ४० करोड ५८ लाख ८६ हजार खर्च भएको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि चालु आव २०७७÷२०७८ का लागि रु एक अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ५६ हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । यो बजेटबाट चालु आवमा २७८ सम्पदा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । जसमध्येमा १७ वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पुनःनिर्माण भइरहेका ७८ सम्पदा पनि चालु आवमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।
हालसम्म १३७ वटा सम्पदा चालु आवमा काम गर्न खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । पैतालीस सम्पदा पुनःनिर्माणको योजना बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्न स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ । बजेट अपुग भएकाले उक्त कार्यक्रम तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए । चालु आवको स्वीकृत कार्यक्रमका लागि अपुग रु ५० करोड बजेट प्राधिकरणसँग माग गरिएको पनि उनले बताए ।
विभागबाट ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत नभएको, बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारण भत्किएको पाँच वर्षसम्म पनि विश्वरुप मन्दिर पुनःनिर्माण शुरु हुन सकेको थिएन । चालु आवको पहिलो चौमासिकमै विश्वरुपको ड्रइङ डिजाइन विभागबाट स्वीकृत भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आन्तरिक स्रोतबाटै पुनःनिर्माण शुरु गरेको छ । कोषले चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट विश्वरुप मन्दिर पुनःनिर्माण शुरु गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्दिरसहित वरिपरिको सत्तल पुनःनिर्माणका लागि रु ७० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । बहु वर्षीय योजना अन्तर्गत आव २०७८÷२०७९ सम्ममा मन्दिर क्षेत्रको पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य कोषले लिएको छ ।
वि.सं. २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी शिलान्यास भएकै दिन शिलान्यास गरिएको ललितपुरको रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर भने अझै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । मन्दिर पुनःनिर्मााणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै शिलान्यास गरेका थिए । श्रीलङ्कन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण व्यवसायीमार्फत भएको पुनःनिर्माणले गति नलिएपछि भङ्ग गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु भएको छ । श्रीलङ्कन सरकारले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माणको स्रोत सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पदा पुनःनिर्माण गर्दा सकारात्मक परिणाम आएका छन् । रानीपोखरीको पिँध र पानी रहने वरिपरिको पर्खालको पुनःनिर्माण पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै भएको थियो । काष्ठमण्डप पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७, २२:२१:००